မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2018-01 > ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌သင်၏အကျင့်ကိုကျူးလွန်
လယ်သမားတစ် ဦး သည်သူ၏ပြားချပ်ချပ်ထရပ်ကားကိုပင်မလမ်းပေါ်တွင်ကားမောင်းပြီးစီးနင်းသူသည်လေးလံသောကျောပိုးအိတ်ကိုသယ်ဆောင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။ သူရပ်တန့်ပြီးသူ့ကိုစီးနင်းလိုက်ပါလာသူသည်ပျော်ရွှင်စွာစီးနင်းရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူသည်ခဏတာကားမောင်းနေစဉ်လယ်သမားသည်နောက်ဘက်မှန်ကိုကြည့်ပြီးကားစီးသမားသည်ကုန်တင်inရိယာတွင်နေရာယူထားကြောင်း၊ လေးလံသောကျောပိုးအိတ်သည်သူ၏ပခုံးပေါ်မှဆွဲနေဆဲဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ လယ်သမားကရပ်လိုက်ပြီးအော် "ဟေ့၊ မင်းကျောပိုးအိတ်ကိုချွတ်ပြီးအိပ်ရာပေါ်မထည့်ဘူးလား" "ဒါဟာအဆင်ပြေပါတယ်" ဟုအဆိုပါပြန်ပေးသမားကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ “ မင်းငါ့ကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ ငါ့ကို ဦး တည်ရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါ၊ ကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်အလွန်ရယ်စရာပင်! သို့သော်ခရစ်ယာန်များစွာ၌ထိုသဘောထားရှိသည်။ သူတို့သည်ကောင်းကင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသော“ လူနာတင်ယာဉ်” တွင်ပျော်ရွှင်ရသော်လည်းသူတို့သည်ကားမောင်းနေစဉ်ပခုံးပေါ်မှဝန်ကိုမထမ်းကြပါ။
Öffnung des Brunnens» (Vers 10) und tränkte die Schafe. Das hebräische Wort «wälzte» an dieser Stelle ist dasselbe Wort wie «befiehl» in Sprüche 16,3. Der Ausdruck des Wälzens im Sinne von eine Last auf Gott wälzen, ist auch in Psalm 37,5 နှင့် ၆5,23 zu finden. Er stellt die vollständige Abhängigkeit von Gott dar. Der Apostel Petrus schrieb in ähnlicher Form: «Alle eure Sorge
werft auf ihn; denn er sorgt für euch» (1. ဓာတ်ဆီ 5,7). Das griechische Wort für «werfen» bedeutet im Wesentlichen dasselbe wie das Wort «(an)befehlen» im Hebräischen, das auch mit «wälzen bzw. werfen (auf)» übersetzt wird. Das ist ein bewusstes Handeln unsererseits. Wir finden das Wort «werfen» auch im Bericht über den Einzug Jesu nach Jerusalem, bei dem er auf einem Esel ritt
သင့်ရဲ့ပခုံးကိုချွတ်ဝန်ကိုယူပါ။ အရာရာကိုဘုရားသခင်အပေါ်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ဖိတ်ခေါ်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်စိတ်ငြိမ်သက်မှုရရှိနိုင်သည်။ သင်၏အစီအစဉ်များ၊ အလိုဆန္ဒများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများသည်ဘုရားသခင့်ဆန္ဒနှင့်အညီဖြစ်သောကြောင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။ ဒါကသင်မငြင်းသင့်တဲ့ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုပါ။